Kungani UK zemininingwane Ukugibela amanani aphezulu kangaka? UK zemininingwane Ukugibela amanani ngabe mhlawumbe wakhushulelwa okusezingeni eliphezulu. Europe ubhekwa best isitimela amade emhlabeni. imvelo isitimela amade Europe aqukethe nezindawo ezinhle. abagibeli zemininingwane ukufinyelela yonke indawo eziqhamuka ezigodini kude ukuze…
Une eziningi ongakhetha lapho unquma kanjani ukuhamba. Thanda igama movie adumile, ungaya nge izindiza, izitimela, nezimoto. Uma kuziwa ngokuthatha uhambo lwe-Italy, Nokho – there are some definite perks to going by…
Okuhambayo Europe ngesitimela ingenye enhle kunazo, kulolu hambo ebabazekayo namasiko emhlabeni. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izitimela okuqondile phakathi emadolobheni amakhulu European efana London entsha Amsterdam ngesitimela noma ufuna romantic isitimela kulolu hambo, European train travel…
Italy ngokobufakazi obukhona ine enkulu ikhofi isiko emhlabeni. Izwe lokuqala European ukungenisa ikhofi eGibhithe, Italy uye waba amathilomu yimpumelelo kusukela Century 16, futhi namuhla thina uzokweluleka 5 ezimangalisayo ikhofi izitolo eduze zezitimela e-Italy. Lesi sihloko…
Venice ingenye yamadolobha idolo kakhulu futhi imilingo e-Italy futhi kalula ngesitimela. Ngokuvakashela Venice ngesikhathi njengoba kuza amaholidi ePhasika, ungakwazi ukujabulela ezimnandi entwasahlobo sezulu. Lokhu kukuvumela ukuba uchithe usuku lonke ngaphandle. Travel to the historic center…
Bheka futhi sithola okuningi kakhulu nge ingenela isitimela adventure European. Ukuhamba ngesitimela eYurophu indlela quintessential ngoba babuka Europe futhi akuyona imfihlakalo kungani. The rail network is extremely developed so travelers can conquer multiple countries and cultures…
Yini ugqozi ukuthi uthathe uhambo isitimela ezingaphezu kuka ukubukela i-Movie okuthakazelisayo Okufakiwe Izitimela? Sibheke ohlwini lwethu Ama-movie engcono Okufakiwe Izitimela, and tweet us at @saveatrain and tell us which ones you have seen and if you loved…
Paris neRoma phezulu ohlwini ebhakedeni cishe zonke isihambi sika. Le mizi umbukwane ezidume ngokuba amasiko abo, eziphambili emhlabeni cuisine, izakhiwo enkulu kanye nokunye okuningi. Nakuba iRoma ne Paris ziqhelelene, basuke kahle zixhunywe isitimela. This means…